Indlela yokwenza iRack Rack yakho yeSlot
Isikhokelo senyathelo-ngeNtshukumo sokwakha iRack Rack yakho
Nantsi indlela yokwakha i- ski rack edibeneyo, uhlobo olusoloko lubona kwiindawo zokuqashisa . Ndibhekiselele kwi-rack apho ubeka khona i-skis ngaphakathi kwaye baxhomekeke ngamafosholo eqaqa. Le yinqwelo ekhuni kakhulu enokuthi ibanjwe ukuba ibambe malunga neendidi ezininzi zeeksiti njengoko unako ukuza nazo.
Uphelile iRack Rack
Esi sithombeni sigqityi seqhekeza senza umsebenzi walo kwigaraji lam. Ungakwazi ukuqhubeka ngokugqithiseleyo ukugqithisa ubude bodonga ukuze ubambe iiskiti ezininzi njengoko ungathanda.
I-1/2 "i-drill kagesi, i-3/4" encinci yokhuni, isibonelelo samandla (isetyhula, i-recip, okanye itafile ibona bonke baya kusebenza), baqhube umpu okanye ibhetri yokufaka i-bit, iT-square, iMarker Mark.
Isiqwenga sesibhakabhaka - 2 "x 8" x nangona kunjalo ubude ufuna i-rack, ezimbini 8 "x 6" - iibhanki ezingama-90 eziphambili (qiniseka ukuba ungeze enye ngaphezulu kwe-5-foot span), 1 1 / 4 "kunye no-2" izikhonkwane zomthi.
Ukumakisha I-Wood - Ingxenye 1
Ukumakisha imithi. Mike Doyle
Ukusebenzisa umgca we-T-square kunye neMicrosoft Mark umgca ubude obubanzi be-2 "x 8" kwi-1/2 "ukusuka kumthi womthi. ". Sebenzisa lo matshini emva komgca wesi-3/4 (usebenzisa iKota kusebenza kakuhle).
Ukumakisha iMithi - Icandelo 2
Ukuphawula imithi. Mike Doyle
Ukuqala kumgca woMatshini woMatshini, yenza ababhali abafanayo ukusuka kwicala ngalinye lesangqa ukuya kumda olwahlukileyo wezinkuni. Maka uphawu phakathi kwendidi kunye nechashazi.
Hlola ngokuphindaphindiweyo imilinganiselo - umnakwethu umkhontrakthi usoloko uthi "Linganisa kabini - sinqunywe kanye."
IiHolesi ze-Ski Rack. Mike Doyle
Ukusebenzisa i-1/2 "i-drill kagesi kunye ne-3/4" encinci yokhuni, uqhube phakathi kwinqanaba lesangqa ngasinye.
I-ski rack slots. Mike Doyle
Ukusebenzisa nantoni na oyibonayo, yabona imigca efanayo ukusuka kumthi wokhuni ukuya kwi-3/4 "umngxuma owenza i-slots.
Namathisela iibakaki. Mike Doyle
Namathisela i-8 "x 6" kwibakethi kwiphepha ngalinye le-2 "x 8", kunye ne "6" ecaleni elibhekiselwe kwinqaba leenkuni, usebenzisa i-1 14 "izikhonkwane zokhuni. Yongeza amanye amabakethi njengoko kuyimfuneko, ukwenzela ukuba akukho sikhala esingaphezulu kweenyawo ezi-5.
Hlanganisa iRack Rack
Hlanganisa iRack Rack. Mike Doyle
Beka kunye nenqanaba le-ski rack kwindawo ekhululekile, uze ujike iibakaki eludongeni nge-2 "izikhonkwane zokhuni.
Abaphakamisi beeNdawo eziPhambili zeMpahla yokuKhukula